SQDJ-2500/2800 Two-piece automatic nail box စက်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ
A. စက္ကူတိုက်ကျွေးရေးဌာန: ၁။ ပင်မမော်တာသည်ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းမြန်နှုန်းစည်းမျဉ်းကိုလက်ခံသည်၊ စနစ်သည်အသံမမြည်ဘဲမြန်နှုန်းစည်းမျဉ်းသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်တည်ငြိမ်သည်။ ၂။ နှစ်ချက်ခွဲ servo စက္ကူတိုက်ကျွေးခြင်းနည်းလမ်းကိုချိန်ညှိမှုတည်ငြိမ်၊ ထိရောက်၊ တိကျစေရန်အတွက်လက်ခံသည်။ ၃။ ရှေ့စာရွက်စက္ကူကျက်တဲ့အပိုင်း ...
ပုံနှိပ်တိုက်၏ ဦး ခေါင်းသည်ရာဘာကြိတ်စက်ဝတ်ဆင်ရခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာအကြံပေးချက်များကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားသည်
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာအကြံပေးချက်များမှင်စက်၏ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုရှည်စေရန်ပုံနှိပ်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများကအမှန်တကယ်လည်ပတ်ရာတွင်အောက်ပါအချက်များကိုသတိပြုပါ၊ ①မှင်စက်၏ဖိအားထိန်းညှိမှုသည်လိုအပ်ချက်များနှင့် Plate roller ၏ဖိအားကိုပေးသင့်သည်။ အပတ်စဉ်စစ်ဆေးပြီး ....
ပုံနှိပ်စက်၏ရာဘာစက်များ (ရေမှိုများနှင့်မှင်စက်များအပါအ ၀ င်) သည်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်၊ သို့သော်အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ပုံနှိပ်ကုမ္ပဏီများစွာသည်၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုပြီးမကြာမီမူလရော်ဘာစက်များကိုအစားထိုးလိမ့်မည်။ ထုတ်လုပ်သူအများစုသည်သန့်ရှင်းရေးမလုံလောက်ခြင်းနှင့် ...
Hebei Xinguang ကတ်ထူစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း Co. , Ltd
ZJ-V5B ဟိုက်ဒရောလစ် shaftless ကြိတ်လှိမ့်မတ်တပ်ရပ်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်္ဂါရပ်၊ စက္ကူညှပ်ခြင်း၊ ဖြည်ခြင်း၊ အလယ်အလတ်အတွက်ဘာသာပြန်ခြင်း ★ဘရိတ်ချိန်ညှိနိုင်သော multipoint ဘရိတ်စနစ်ကိုသုံးသည်။ ★အမြဲ ...
ပုံနှိပ်စက်သည်ကတ်ထူသေတ္တာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏နောက်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူပုံနှိပ်ခြင်း၊ ခေါက်ခြင်း၊ ခေါက်ခြင်း နိုင်ငံတကာသုံးလျှပ်စစ်စက်အစိတ်အပိုင်းများကိုရွေးချယ်ပါ ...
CORRUGATED BOARD ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ပုံမှန်အခြေအနေနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေများ
warpage သုံးခု၊ warpage ၁ ခုကိုအလျားလိုက်အောက်သို့ဆွဲခြင်း၊ အလျားလိုက်အပေါ်သို့တက်ခြင်း၊ အလျားလိုက်အပေါ်သို့တက်ခြင်း၊ အလျားလိုက်အောက်သို့ဆွဲခြင်း၊ S-shaped warping, two-way warping ၂. warping ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောအန္တရာယ်များ ဖြတ်လိုက်တာနဲ့စက္ကူကအလိုအလျောက်မရဘူး။
၁။ ကော်မှုန့်ညံ့ခြင်း (ပွင့်ကော်၊ ကော်အတု) ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ကတ်ထူပြား၏ကန ဦး အစကို ၅ မိနစ်ကြာအောင်ထားပြီးနောက်၊ ပြင်ပအင်အား၏လုပ်ဆောင်မှု၊ အတွင်း၊ မျက်နှာပြင်၊ သို့မဟုတ် A၊ B ကြွေပြားများ စက္ကူမျှင်များအားလုံးမပျက်မစီးဘဲ ...
Corrugated board production line ၏အဖြစ်များကျရှုံးမှုများနှင့်တန်ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်များ
21-06-26 တွင် admin မှ
စက္ကူကိုအဓိကအားဖြင့်ကွဲပြားသောဖိုင်ဘာပစ္စည်းများပါ ၀ င်သောသစ်သား၊ ဝါးပျော့ဖတ်နှင့်မြက်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ စက္ကူကြိတ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သောစက္ကူ၏အထူ၊ သို့မဟုတ်စက္ကူနှင့်ကတ်ထူပြားထဲသို့ထည့်ပါ။ ဒါပေမယ့်လိုင်းကမတင်းကျပ်ဘူး။ ယေဘူယျအားဖြင့်အခြေခံအလေးချိန်သည် ၂၀၀ ဂရမ်/မီတာအောက်သို့မဟုတ်အထူ ၀.၁ မီလီမီတာထက်နည်းသည်။ ဗိုလ်မှူးကြီး ...
စက္ကူဘူးများပြုလုပ်သောစက်/Single Facer စက်
Single-sided machine တွင် roll Holder နှင့် Single-side Corrugated Forming Machine တို့ပါ ၀ င်သည်။ ပထမ ဦး စွာ corrugated core paper ကိုအပူပေးပြီးနောက် corrugated roll ကိုလိုအပ်သော corrugated shape ပုံစံဖြစ်အောင်သုံးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကော် (ကော်ဓာတ်) ကို corrugated peak and combi တွင်သုံးသည်။
ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးမြင့်သောကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာဖောက်သည်များစွာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်၊ ၎င်းတို့အနက်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်မှဖောက်သည်များ၊ ၎င်းတို့သည် ၁၈၀၀ အမျိုးအစားသုံးကတ်ထူပြားကတ်ထူပြားထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ၁၈၀၀ ကို ၀ ယ်ခဲ့သည်၊ သုံးနှစ်ကြာဖောက်သည် Feedba ဖြစ်သည်။ .။
နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရေရှည်ရောင်း ၀ ယ်ရေးနှင့်အားဖြည့်ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်
21-03-10 တွင် admin မှ
[အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်] Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co. , Ltd သည်မြို့တော်ပေကျင်း၏တောင်ဘက်နှင့် Jinan မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ ရေနှင့်မြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလွန်အဆင်ပြေသည်။ ၎င်းသည်စက္ဏူထူစက်များနှင့်ပလပ်စတစ်များထုတ်လုပ်မှုပမာဏအတော်အတန်ရှိသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
နည်းပညာ | ကုန်သေတ္တာ၏ဆုံးရှုံးမှုနှင့်တိုးတက်မှုအစီအမံများ
ကုန်သေတ္တာလုပ်ငန်းများ၏ဆုံးရှုံးမှုသည်ကုန်ကျစရိတ်ကိုထိခိုက်စေသောအဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရှုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်လုပ်ငန်း၏ထိရောက်မှုကိုကြီးမားစွာမြှင့်တင်နိုင်ပြီးထုတ်ကုန်များ၏ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ကတ်ထူစက်ရုံတွင်ဆုံးရှုံးမှုအမျိုးမျိုးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြပါစို့။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် t ...
စက္ကူကတ်ထူပြားမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူများစွာသည်စက္ကူကတ်ထူပြားကိုစဉ်းစားလိမ့်မည်။ တကယ်တော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပြောင်းပြန်လှန်တာနဲ့မတူပါဘူး။ ကုန်ကြမ်းများ၊ ကြွေပြားဖော်စက်များ၊ ပျံသန်းခြင်းများ၊ ခေါက်စက်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခါးပတ်များ၊ စသည့်ကဏ္aspectsများမှစုံစမ်းရန်အကြံပြုသည်။
Hebei Xinguang ကတ်ထူစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း Co. , Ltd ။
dongguang ခရိုင်၏တောင်ဘက် ၃ ကီလိုမီတာ၊ ၁၀၄ အမျိုးသားအဝေးပြေးလမ်းမကြီး၏အရှေ့ဘက်